युगसम्बाद साप्ताहिक - राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ
Tuesday, 10.15.2019, 07:39pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 06.06.2011, 02:42pm (GMT+5.5)
अघिल्लो महिना भारतका अधिकारवादी नेता अन्ना हजारेले भारत सरकारले ‘जनलोकयत विधेयक’लाई संसद्मा पेश नगरेको भन्दै त्यसका लागि अनशनमा बसे । उनको अनशनलाई भारतका राजनीतिज्ञदेखि कलाकार र खेलाडीसम्मले समर्थन गरे । भारत सरकार हजारेका सामु झुक्यो र संसद्मा सो विधेयक ल्याउन मञ्जुर भयो । त्यस्तै योगगुरु बाबा रामदेव भारत स्वाभीमान आन्दोलन चर्काउँदै भ्रष्टाचार निवारण लगायत सुशासन र भारतीय संस्कृतिको रक्षा गर्न सरकारले स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने भन्दै अनशनमा बसे । रामदेवले भारतबाट विदेशिएको चारसय लाख करोड रुपैयाँ स्वदेश ल्याउनुपर्ने माग गरे । तर भारत सरकारले शनिवार मध्यरातमा करिब ५ हजार प्रहरी लगाएर सत्याग्रहको निर्मम दमन ग¥यो । रामदेवलाई प्रहरीले अज्ञात स्थलमा पु¥यायो । रामदेवले भारत सरकारसंग गरेको वार्तापछि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भैरहेको र गिरफ्तारीको तयारी सरकारले गरिरहेको खुलासा गरेको केही घण्टामै बल प्रयोग गरियो । यो घटनाले भारतमा ठूलो हंगामा मच्चिएको छ । सरकारको यो रबैयालाई भ्रष्टहरु शक्ति प्रदर्शनको रुपमा विशलेषण गर्न थालिएको छ । उल्लेखनीय विषय के छ भने रामलिला मैदानमा करिब एक लाख व्यक्ति रामदेवसंगै अनशनमा थिए ।
माथिका दुई प्रसंग किन उल्लेख गरियो भने हाम्रो राजनीति भारतबाट प्रभावित र त्यहींबाट निर्देशित हुने गरेको छ । तर भारतका कुनै एक नागरिकले मुलुकको हितका लागि गरेको संघर्ष हाम्रा नेता, अधिकारकर्मी वा अरु जोसुकै क्षेत्रका मानिसले अँगाल्ने गरेको पाइँदैन । अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै आफूलाई अधिकारकर्मी बताउनेहरू किन मुलुकको समग्र हितमा संलग्न हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्नकै सेरोफेरोमा माथिका प्रसंग उल्लेख गरिएको हो । अन्ना हजारे र बाबा रामदेवको गतिविधिलाई नेपालको भ्रष्टाचार र कुशासन हटाउने अभियानको सन्दर्भका रुपमा उल्लेख गरिएको हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सवालमा कुनै राजनीतिक दलले अग्रसरता देखाएका छैनन् भने कुनै पनि अधिकारवादी संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो अभियान छेडेका छैनन् । मुलुकको सुशासनका लागि कसैले पनि चासो नदेखाएको सन्दर्भमा रामदेबले चालेको स्वाभिमान आन्दोलनबाट हामीले पनि सिक्ने हो कि ? विगत केही महिनादेखि स्वाभिमान आन्दोलन मार्फत झण्डै एक लाख किलोमिटर यात्रा गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन सफल रामदेवको अनशनमा झण्डै एक करोड मानिस सहभागी भएको भारतीय संचार माध्यमहरूले बताइरहेका छन् । यो आफैंमा अनौठो समाचार हो ।
यस्तै अभियानकारीको आवश्यकता मुलुकमा अहिले छ । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र संविधान निर्माणदेखि लिएर नयाँ नेपालको संरचना र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका स्पष्ट एजेण्डा भएका राष्ट्रभक्तहरूको उदय अहिलेको हाम्रो खाँचो हो । नेतृत्वमा पुगेर सबै बिर्सने र आफू र आफ्नो समूहको मात्र हितमा तल्लिन रहनेहरूकै कारण मुलुकको अवस्था यसरी नाजुक बन्दै गएको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा कोही अन्ना हजारे र रामदेवको जन्म हुनुपर्छ ।
प्रसंग भ्रष्टाचार निवारण र भ्रष्टहरूको कालो धनको राष्ट्रिय करण नै हो । नेपालमा भ्रष्टहरू शक्तिशाली छन् भन्ने ठम्याई पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले गलत सावित गरिदिनुभएको छ । त्यसो त तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का नेता चिरञ्जीवी वाग्लेमाथि भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित गर्दै विशेष अदालतले २०६१ साउन ७ गते फैसला गर्दै वाग्लेलाई पौने तीन करोडभन्दा बढी आर्थिक जरीवाना, साढे दुई वर्ष कैद तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफ्त गर्ने आदेश दिएको थियो । यसको खुसीयालीमा राजधानीमा विभिन्न संघ संस्थाले प्रदर्शन पनि आयोजना गरे । यसको विरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा गए र सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा झण्डै १४ वर्षपछि फैसला ग¥यो । त्यो पनि रामप्रसाद श्रेष्ठको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण । झण्डै डेढ दशकसम्म अदालतले भ्रष्ट ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले संरक्षण दिएर राख्यो । यो ठूलो दुर्भाग्यको विषय बन्यो ।
त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिलो आफ्नो घरभित्रबाट यसको छानवीन हुनुपर्छ । सरकारका रहेका र रहिसकेका पार्टी प्रमुखहरूबाट आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता वा नेताहरूको हिजो र आजको आर्थिक स्थितिको तुलना गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठूलो प्रमाण त्यहाँ भेटिने छ । मन्त्रीका नाममा वा ठूला नेताको नाममा सानातिना सबै प्रकारका भ्रष्टाचार भैरहेका हुन्छन् । एउटा सिंचाई होस् वा सडक त्यसको लागि दिइने ठेक्कामा सर्वप्रथम सम्बन्धित मन्त्रीलाई भाग छुट्याइन्छ वा माग गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले भ्रष्टाचारी आफ्नै घरबाट खोज्ने कि नखोज्ने ? देश विकासको लागि खर्चिने रकम मन्त्रीहरूको भुँडी विकासमा पारेपछि कसरी राष्ट्र र जनताको उन्नति हुने । हिजो जे भयो भयो । त्यसको छानवीन र कारवाही हुँदै जान्छ । तर अब जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ कि भ्रष्टाचार हुन दिंदैनौं भनेर । यसका लागि सबै निकायले आफूलाई इमान्दार र राष्ट्रभक्तका रुपमा उभ्याउनु पर्दछ ।
एउटाले गरेको भ्रष्टाचारले अर्कोलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ । ड्ढलानाले यति कमायो, त्यो मभन्दा माथि जाने भो, मभन्दा सम्पत्तिवाल बन्ने भो भन्ने मानसिकताको विकास हुन्छ जसको कारण सत्ता परिवर्तन, वहिर्गमन गुट, उपगुट र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाहरू हुने गर्दछन् । भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा कुरा गर्नु नै सबभन्दा महानता ठान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले एउटा दह्रो प्रतिबद्धता र चाहना देखाउनु पर्छ । जब भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् भने यसको नियन्त्रण हुने सवाल नै उठ्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निस्वार्थी भावना, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी अनि राष्ट्रले खोजेको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ नकि कुरा मात्र । तसर्थ देश, जनता र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि जनताको सार्वभौम लिएका जनप्रतिनिधि र जनताले तिरेको राजश्वबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने राष्ट्रसेवकहरूमा देश र जनताप्रति इमान्दारिता भएमा मात्र सबैको भलो हुनेछ । यस सम्बन्धमा एउटा भन्नैपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो देशको विद्यमान ऐन, कानूनलाई पूर्ण पालना गरेर यससंग सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिइनु पर्छ अनि शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, सोंच र प्रतिबद्धता भएमा मात्र भ्रष्टाचार निर्मुल हुनसक्छ होइन भने बाहिर रहँदा भ्रष्टाचार देख्ने र भित्र गएपछि स्वच्छ देख्ने स्वार्थी भावना रहुन्जेलसम्म यी कुराहरू कायमै रहनेछन्, भ्रष्टाचार निवारणका कुरा बोलीमा मात्रै सीमित रहिरहने छ ।
प्रत्येकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता ‘भ्रष्टाचार निवारण’ हुने गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा यसै विषयलाई बडो जोड दिएको पनि पाइन्छ । तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुँदैन । हुँदाहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति समेत वर्षौंसम्म हुँदैन भने त्यस्तो नेतृत्वबाट मुलुकले सुशासनको आशा कसरी राख्न सक्छ । राजनीतिक भागवण्डाको किचलोले संवैधानिक निकायहरू अस्तव्यस्त हुन पुगेका छन् भने राजनीतिक संरक्षणमै भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । करोडौं करोडका भ्रष्टाचारका काण्डहरू मच्चिएर प्रमाणित हुँदा समेत दोषीलाई कार्बाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्न सकेको देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा भारतका अन्ना हजारे र योग गुरु रामदेवको अभियानबाट हामीले पनि केही सिक्ने कि ?